Karnavaly: Lahatsary Avy Amin’izao tontolo Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2017 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, Español, English
(Marihana fa lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Febroary 2008 ity adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Ny fomba iray ahafantarana ny kolontsaina iray, dia ny mahita ny fomba fankalazana sy ny antony hankalazana izany. Maro ny firenena manana fety iraisana, dia ny Karnavaly, ary samy manana ny fankalazany izany ny firenena tsirairay. Matetika ankazaina mandritra ny herinandro alohan'ny Karemy izany ao amin'ny firenena katolika, ary matetika fotoana hisakafoanana, hankafizana sy hihinana sakafo be alohan'ny 40 andro fifadian-kanina sy ny vavaka fanomanana ny fanombohan'ny Paska. Mampiseho antsika ny fomba ankalazàna ny vanim-potoanan'ny karnavaly tamin'ity taona ity tao Bolivia,Goyana Frantsay, Goa, India sy Kroasia ny lahatsary avy amin'ny olon-tsotra.
avy amin'i JC i Núria
Azo antoka fa ny karinavaly manerantany malaza sy miseho matetika amin'ny fahitalavitra dia ny Karinavaly Breziliana, feno balaonina, samba sy dihy, ary Talata Matavy kosa ny ao Nouvelle-Orléans. Angamba efa nandre momba ny karinavaly ao Venizy koa ianao, feno harlequins sy mpifety manao saron-tava. Satria marobe ireo vaovao momba azy ireo, tsy holazaiko eto daholo izany. Fa kosa, amin'ny alalan'ny lahatsary nalain'ny olona tahaka anao, hampiseho ny karnavaly mety mbola tsy renao ny lahatsary.
Avy any Bolivia, nampiditra lahatsary maro misy ireo hetsika samihafa nandritra ny karnavaly tamin'ity taona ity tao Oruro i angelcaido666x, fetibe izay nambaran'ny UNESCO tamin'ny taona 2001 fa Sanganasa Am-bava sy Vakoky ny Olombelona tsy azo tsapain-tanana Nivadika ho fampahafantarana ny Katolika amin'ny alalan'ny fanoloana ny Tany Reny ho Maria Virjiny sy Dadatoa Tendrombohitra ho Devoly ity fetibe nentim-paharazana Andeana mankalaza an'i Pachamama sy Tio Supay ity.
Ity lahatsary ity avy amin'ny angelcaido666x ity indray dia mampiseho ny lafiny iray hafa amin'ny karnavaly, ny fetin'ny tarika. Tao amin'ny bilaoginy, manazava ny hira nolalaovin'izy ireo ihany koa izy ary nizara ny zavatra niainany tao amin'ny fetibe..
Avy Ao Goyana Frantsay, mpisera Dailymotion lesmezenes indray mampiseho antsika ny fomba amam-panao Kreôla touloulous, vehivavy mitafy akanjo mirebareba manarona ny vatana rehetra, anisan'izany ny fonon-tanana, ny fehiloha sy ny lamba mandrakotra ny tava mandritra ny alin'ny karnavaly, amin'izay tsy misy mahafantatra izy ireo. Mandritra ny dihy touloulous, tsy maintsy mandihy miaraka amin'izay touloulou mangataka azy ireo handihy sy manome zava-pisotro azy ireo ny lehilahy, izay angatahana kisendrasendra fotsiny, na dia tsy fantatra anarana aza. Azonao jerena izany lahatsary izany amin'ny fanarahana ity rohy ao amin'ny tranokalan'ny lesmezenes DailyMotion ity.
Tontosaina ao Goa sy Kerala kosa ny fetibe ao India. Avy any Goa manokana, mpisera YouTube JoeUKGoa namoaka lahatsary maro misy ny fetibe ao amin'ity zanatany Portogey taloha ity.
Ao Kroasia, mandehandeha ao anaty matso ny olona na dia eo aza ny orana. Mpisera intrepidCRO namoaka lahatsary mampiseho ny “zvončari” na lakolosy, izay anisan'ny farany tamin'ny filaharana ary miaraka amin'ny loham-bibin'izy ireo sy lakolosy lehibe natao hampitahorana ny ririnina.